(ရေစုပ်ကိရိယာ koop, ရေစုပ်စက် koop, ရေစုပ်စက်, ရေစုပ်ကိရိယာ)
- ရေတင်ခြင်းအတွက် တာရှည်သောစက်ဖြစ်သည်။
- စပါးစိုက်ခင်းများ (သို့မဟုတ်) ရေကြီးသည့်နေရာများတွင် ရေတင်ရန် သင့်တော်သည်။ သေးငယ်သည့်အရွယ်ရွေ့လျားလွယ်သည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်များကို အင်ဂျင်များအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း KOOP အမှတ်တံဆိပ် တရုတ်နိုင်ငံမှ SET အဖြစ် ရှိသည်။
ရေစုပ်စက်အရွယ်အစား2လက်မမှ4လက်မအထိ မော်ဒယ်ခွဲခြားခြင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. KOOP MODEL KDP50L အရွယ်အစား2လက်မ၊ စတီးကြိုးစနစ်၊ လောင်စာဆီအရေအတွက် 2.5 လီတာ
2. KOOP MODEL KDP80L အရွယ်အစား3လက်မ၊ စတီးကြိုးစနစ်၊ လောင်စာဆီအရေအတွက် 2.5 လီတာ
3. KOOP MODEL KDP80L အရွယ်အစား3လက်မ၊ စတီးကြိုးစနစ်၊ လောင်စာဆီအရေအတွက် 2.5 လီတာ
4. KOOP MODEL KDP100L အရွယ်အစား4လက်မ၊ စတီးကြိုးစနစ်၊ လောင်စာဆီအရေအတွက် 2.5 လီတာ
ဒီဇယ်အင်ဂျင် JIANGDONG ကုန်ပို့လွှာရယူရန်